Karazana fatana - adesolaire
Fatana masoandroFatana masoandro
Fandrahoana sakafo amin’ny herin’ny masoandro
Lokoana mainty ny anatin’ny fatana sy ny ivelan’ny vilany mba hisintona ny taratra masoandro mazava, izay mivadika hafanana. Mahatratra 150 °C ny hafanana ao anaty ny boaty mainty. Afaka andrahoana ny fatana masoandro, andrahoana mofo dipaina sy mofomamy, itehirizana sy anamainana voankazo sy legioma, ary koa ampangotrahana rano sy anadiovana fitaovam-pitsaboana.
Mamokatra fatana mandeha masoandro lehibe ihany koa ny ADES, izay natao manokana ho an’ny fandrahoan-tsakafo eny an-tsekoly, hopitaly sy hotely, etc.
« OLI-b » fampiasa amin’ny kitay, « OLI-c » fampiasa amin’ny saribaoFatana mitsitsy
Afaka ampiasaina amin’ny fotoana rehetra (na misy masoandro na maloka), madio sy manaja ny akora fototra
Ny fatana mitsitsy vokarin’ny ADES dia ahafahana mitsitsy saribao sy kitay hatramin’ny 65%. Ny fatana dia ahitana tanimanga masaka mifono sihoa vy miloko maitso, ary vy boribory fitoeram-bilany sy makarakaram-patana vita amin’ny tanimanga. Vita eto Madagasikara avokoa ireo fitaovana ireo.
Misy karazany roa ireo fatana mitsitsy : « OLI-b » ampiasaina amin’ny kitay, «OLI-c » ampiasaina amin’ny saribao. Ireo karazany fatana roa ireo dia samy ahitana habe telo fampiasa amin’ny vilany manana savaivo 28, 45 sy 60 cm.
Paraboly mandeha masoandroFatana Paraboly mandeha masoandro
Ny fatana masoandro paraboly dia manangona eo amin’ny toerana iray ny taratry ny masoandro
Ireo takelaka manjelatra amin’ny paraboly no manangona ny taratry ny masoandro ho eo afovoan’ny fatana, izay toerana ametrahana ny vilany ary ahitana hafanana ambony dia ambony, azontsika anaovana fomba fahandro maro isan-karazany toy ny : manendy, manao ladobo, manao mofo ary indrindra koa ampangotrahana rano sy anadiovana fitaovam-pitsaboana.
Takelaka manjelatra tsy mety harefesina maro natambatra ho boribory no manome fatana masoandro paraboly, ary vy matevina ny tongony izay afaka ahodina manaraka ny fiposaky ny masoandro. Akora tsy voarafitra no alefan’ny Soltec, ary ny mpiasan’ny ADES any amin’ireo ivotoerana rehetra any no manambatra ny akora ho paraboly.
Ireo karazana fatana vitan’ ny ADESFamokarana fatana eto Madagasikara
Ireo karazam-patana rehetra ireo dia vita eto Madagasikara avokoa.
Ny ADES dia manome karama sahaza sy ampy hoan’ny fianakaviana maro an-trano ary manampy bebe kokoa ny mpiasa eo amin’ny lafiny sosialy.
© 2020 ADES – tous droits réservés ¦